Kheyraadka Dhaqaalaha/Economic Resources - Somali » Global Cleveland
Global Rising Class 2021-2022
Landed: Stories of Newcomers
Here Are The Workers
Kheyraadka Dhaqaalaha/Economic Resources - Somali
Ma ku saameysay dhaqaale ahaan COVID oo ma u baahan tahay kaalmada biilka korantada? Lacagaha lagu caawinayo baaqii hore ee la soo dhaafay ilaa 3/1/20 ayaa loo heli karaa deganayaasha Deegaanka Cuyahoga. Codso:http://ow.ly/XXzv50CqGjG Xaddidyada dakhliga ayaa khuseeya (qoyska ka kooban 4 qof waa inuu kasbadaa $ 91,000 sanadkii).
Qoysaska uqalma ee leh carruurta da’da da’da ah ee iskuulka ayaa heli kara $ 302 macaashka cunnada halkii cunug!
Barnaamijka Faafa – Faa’iidada Wareejinta Faa’iidooyinka Elektiroonigga ah (P-EBT) waa lacag dheeraad ah oo loogu talagalay qoysaska si ay ugu
iibsadaan cunno sabab u ah xiridda iskuullada la xiriira COVID-19.
Qoysaska reer Ohio waxay heli doonaan $ 5.70 halkii cunug maalin kasta oo iskuul loo xiray COVID-19.
Uma baahnid inaad iska qorto barnaamijka si aad ugu adeegsato lacagaha.
Caruurta uqalma cuntooyinka bilaashka ah iyo kuwa qiimaha jaban ilaa iyo bisha Maarso waxay heli doonaan lacag dhan $ 302.10. Caruurta u qalma cuntada bilaashka ah iyo qiime dhimista bisha Abriil waxay helayaan $ 239,40.
Adeegso P-EBT iyo sidoo kale meelaha cuntada lagu qaado iyo tagitaanka si aad ula kulanto baahida cunuggaaga.
Adeegsiga P-EBT saamayn kuma yeelanayso adiga ama xaaladda imigreeshanka ee ilmahaaga. Sharciga qaanuunka dawliga ahi kama khusayso maalgelinta PBT.
Waxaad heli doontaa maalgalinta P-EBT haddii ilmahaagu (carruurtaadu) ku jireen fasalada K-12 ee sannad dugsiyeedka 2019-2020 iyo:
Helay cuntooyin bilaash ah ama qiime jaban oo hoos imanaya Barnaamijka Qadada Iskuullada Qaranka AM
Waxa uu aaday dugsi ay arday kastaa ku helaan cunno bilaash ah
Ka raadi warqad warqad ka socota Waaxda Shaqada iyo Adeegyada Qoyska ee Ohio (ODJFS) badhtamaha bisha Juun.
Hadaad u maleynaysid in qoyskaagu uqalmay, laakiin aadan helin warqad ugu dambayn badhtamaha bisha Juun, wac ODJFS lambarka 1-866-244-0071.
Macluumaad dheeri ah:http://ohiopebt.org/